क्लिफ्स अफ मोहर, आयरल्याण्डमा विशेष भ्रमण यात्रा समाचार
मौसम, प्रकृति र समयका शक्तिहरूले विश्वभरि अद्भुत परिदृश्यहरू उत्पादन गरेका छन्। आयरल्याण्डमा, उदाहरणका लागि, धेरै पर्यटक मोतीहरूको देश, त्यहाँ छन् क्लिफ्स मोहर.
यहाँ जमिन र समुद्री बीचको अचानक भेटले शानदार, नाटकीय रूप धारण गरेको छ, जुन यो युरोपियन देशको सबैभन्दा लोकप्रिय पर्यटन आकर्षण हो। के तपाईं तिनीहरूलाई चिन्नुहुन्छ? यदि यो केस हैन भने ध्यान दिनुहोस् किनकि यहाँ हामी तपाईंलाई छोडदछौं व्यावहारिक जानकारी तपाईंको अर्कोमा आयरल्यान्डको भ्रमण गर्नुहोस् तिनीहरूलाई सम्झना छैन।
2 कसरी मोहरको चट्टानहरूमा जान
3 मोफरको क्लिफ्स भ्रमण गर्नुहोस्
4 क्लिफ्स अफ मोहेरका लागि टिकटहरू खरीद गर्नुहोस्
तिनीहरू आयरल्याण्ड मा छन् काउन्टी क्लेयरमा, बुरेन भनेर चिनिने क्षेत्रमा। तिनीहरू चूना पत्थर र माटो र विभिन्न खनिजहरूबाट बनेको एउटा प्रकारको कालो चट्टान मिलेर बनेको छ 300०० मिलियन वर्ष पहिले। वास्तवमा, अझै पुरानो चट्टानहरू चट्टानको फेदमा ढु cutting्गा काटिरहेको पुरानो नदीहरूले छोडेको देख्न सकिन्छ जुन सबैभन्दा पुरानो चट्टान हो।
चट्टानहरु तिनीहरू सहि समुद्री तटमा रहेका पर्यटक ट्रेलको केन्द्रमा छन् जसलाई वाइल्ड एटलान्टिक वे भनिन्छ, २2500०० किलोमिटरको मार्ग जुन पैदल, कार वा साइकल द्वारा गर्न सकिन्छ। तिनीहरू शानन अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको नजिक र गाल्वे र लाइमरिकका शहरहरू नजिक छन्।
आधिकारिक मार्ग वा क्लिफ्स मोहर वाक यो हागको हेडबाट Doolin सम्म १ kilometers किलोमिटर दौडन्छ र यसमा भिजिटर सेन्टर र प्रसिद्ध O'Brien टावरको भ्रमण समावेश छ जुन एक ठूलो सहूलियत बिन्दु हो। बदलेमा, त्यहाँ दुई ट्रेलहरू छन् आगन्तुक केन्द्रको नजिक, आधिकारिक एउटा जुन सुरक्षित छ र अर्को सुरक्षित छ किनकि यो किनारको नजिक पुग्छ।
कसरी मोहरको चट्टानहरूमा जान
तपाईं यो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ सार्वजनिक बस, बाइक, खुट्टा र कार। यहाँ यात्राको महत्व छ किनकि यो इत्काको कथा जस्तै हो, यात्रा गन्तव्य भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण हो। यदि तपाईं कार प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईं कुनै पनि ठाउँमा भाँडामा लिन सक्नुहुनेछ जुनसुकै ठाउँमा पनि वा छेउछाउका गलवे वा लाइमरिकमा।
त्यहाँ नजिकैको पार्कि parking्ग छ, आगन्तुक केन्द्रको ठीक अगाडि र तपाईं त्यहाँ भर्ना टिकट खरीद गर्न सक्नुहुनेछ। टिकटको साथ, असीमित पार्किंग सामेल गरिएको छ।
यदि तपाईंसँग मोटरहोम छ भने, यो चट्टानहरूको आधिकारिक वेबसाइटलाई सम्पर्क गर्न सल्लाह दिइन्छ किनकि तपाईंले एक ठाउँ आरक्षित गर्नुपर्नेछ। हामी ट्याक्सीबाट शहरहरू बाट पनि आउन सक्छौं जुन हामीले पहिले नाम गरेका छौं। र पक्कै पनि लामो दूरीको पर्यटक बस द्वारा, विशेष गरी अप्रिल र सेप्टेम्बर बीच।
लाइमरिक, एनिस, कर्क, गाल्वे वा डब्लिन बाट तपाईले भाडा लिन सक्नुहुन्छ बस बाट दिन यात्रा र डब्लिन बाट भ्रमण एक दिन टिक्छ। तिनीहरू सामान्यतया बिहान7मा छुट्छन् र साँझ7मा फिर्ता हुन्छन्।
तपाईं रेलबाट पनि त्यहाँ पुग्न सक्नुहुन्छ। लिनुहोस् लाइब्रिक हुँदै डनिलिनबाट एनिस जाने रेल र त्यहाँबाट बस प्रयोग गर्नुहोस्। सबै आयरिश शहरहरू रेल द्वारा जडान भएका छन् त्यसैले यो सजिलो छ। यदि तपाईं यस मार्गमा हिंड्ने निर्णय गर्नुहुन्छ भने, तपाईंलाई पहिला Doolin पुग्नु पर्छ किनभने चट्टानको तटमा जाने पथ यहाँबाट सुरू हुन्छ।
Doolin बाट चट्टानहरु को लागी 8 किलोमिटर छ र यदि तपाई Hag को हेड को लागी पछाडि जान चाहानुहुन्छ यो १२ किलोमिटर छ।
त्यहाँ धेरै छन् साइकल यात्रा मार्गहरू तिनीहरू चट्टानहरू र सामान्यतया क्लेयरको तटमा दौडिन्छन्। एक्लो प्लानेटले भन्छ कि काउन्टी क्लेयर विश्वको १० सर्वोत्तम ठाउँहरू मध्ये एक हो जुन साइकल चलाउन सकिन्छ ... तथ्य यो हो कि बाइकबाट तपाईं एट्लान्टिकको सुनौलो समुद्री किनारहरूको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ, शहरबाट शहर र पबबाट पब जानुहोस्। र यसको विपरित। तपाईं आगन्तुक केन्द्रमा मार्गहरूको नक्शा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र बाइकहरू आसपासका धेरै शहरहरूमा भाँडामा लिन सकिन्छ उदाहरणका लागि।
यदि तपाईं सार्वजनिक बस प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईं बस गल्वे वा डब्लिनमा बस समात्न सक्नुहुन्छ। बसहरू छन् बस इरेनान तिनीहरू ग्रीष्म inतुमा एनिस र गाल्वे र वर्षको बाँकी तीन दिनमा दिनको पाँच पटक भाग्छन्।
चट्टानहरु २ December, २ 24 र २ except बाहेक सबै बर्ष खुला छ। जनवरी र फेब्रुअरीमा तिनीहरू बिहान9देखि साँझ5सम्म खुल्छन्, मार्च र अप्रिल यो बिहान 8 देखि pm सम्म र मे र अगस्त बीच बिहान7देखि 8 साँझ सम्म हुन्छ। सेप्टेम्बर र अक्टुबर बिहान9देखि साँझ 8 सम्म र नोभेम्बर र डिसेम्बर बिहान to देखि साँझ7सम्म खुल्ला हुन्छ।
यदि तपाइँ आगन्तुक केन्द्रको चट्टानहरूमा विशेष प्रदर्शनीको भ्रमण गर्न रुचि राख्नु हुन्छ भने २० मिनेट बन्द हुनुभन्दा अगाडि जान कोशिस गर्नुहोस्। पुरानो निर्माणको चट्टानमा सबैभन्दा विशेष ठाउँ मध्ये एक O'Brien टावर जे होस् यो प्रत्येक दिन खुला छ, यो वर्ष को समय मा निर्भर गर्दछ फरक समय छ। त्यहाँ क्याफे, शिल्प कार्यशाला र स्मारिका पसल छ।
कृपया नोट गर्नुहोस् मौसमले चट्टानहरूको भ्रमणलाई ठूलो असर गर्छ त्यसोभए लचिलो योजना बनाउने प्रयास गर्नुहोस्। उच्च मौसम जुलाई र अगस्ट हो तर तपाइँ अप्रिल र सेप्टेम्बर देखि धेरै व्यक्तिहरू भेट्टाउनुहुनेछ। जानको लागि सबैभन्दा खराब समय यदि तपाईंलाई शान्त मन पर्छ भने बिहान ११ बजे र बेलुकी 11 बजेको बीचमा हुन्छ। Y यदि तपाइँ साप्ताहिक अन्त्य राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ.
मौसमको सन्दर्भमा त्यहाँ रंगहरूको दायरा छ जसमा पहेंलो, सुन्तला र रातो यसको अवस्था वर्गीकृत गर्दछ: रातोमा, अवश्य पनि, सेन्टर बन्द हुन्छ र मान्छे खाली हुन्छ यदि त्यहाँ वरिपरि मानिसहरू छन् भने। तपाईं सँधै आधिकारिक वेबसाइटमा यो जाँच गर्न सक्नुहुन्छ।
क्लिफ्स अफ मोहेरका लागि टिकटहरू खरीद गर्नुहोस्
समय बचत गर्न तपाई सँधै गर्न सक्नुहुन्छ अनलाइन किन्नुहोस्। टिकटमा बाहिरी र भित्री क्षेत्रहरूको सुविधाहरू, आगन्तुक केन्द्रको प्रवेशद्वार र यसको प्रदर्शनी र पार्कि lot्ग सामेल छन्।
अनलाइन तपाईं नौ टिकट बुक गर्न सक्नुहुन्छ। वयस्क प्रति मूल्यeयूरो छ र १ 16 बर्ष उमेरका बच्चाहरू निःशुल्क छन्। विद्यार्थी र s 65 बर्ष भन्दा बढीले 4..50० युरो भुक्तान गर्छन्। सत्य यो छ कि आरक्षण बनाउने र अनलाइन किन्नको लागि उत्तम हो, त्यसोभए तपाईंले आनन्द लिनुपर्दछ। यदि मौसम राम्रो छ भने तपाईसँग गलवे बेमा अरन टापु र उही काउन्टीको पहाडहरूका दर्शनीय दृश्यहरू हुनेछन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » Getaways यूरोप » आयरल्याण्ड » क्लिफ्स अफ मोहर, आयरल्याण्डमा विशेष भ्रमण